ပီ Vurtcbah 10
Miss Universe 2015 နှစ်ပေါင်းတစ်မော်ဒယ်ပီရိုမီယိုအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဝိုင်းတွင်ထင်ရှားပီ Alonso Wurzbach, စာရင်းထဲဒသမရာအရပျကိုယူ။ ပီ - သူမက Miss Universe ဖိလစ်ပိုင် 2015 ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက် 2015 တစ်နှစ်အတွက် Miss Universe သရဖူကိုအနိုင်ရသူကိုမင်းသမီး, မော်ဒယ်နှင့်အလှအပမိဖုရား။
Friendly and ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်, ဆယ်ကျော်သက်ညီမနှင့်လူသတ်, ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်တစ်ဦးသည်အိမ်နီးချင်းမိန်းကလေး - အလွန်ကြီးစွာသောသရုပ်ဆောင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။
Priyanka Chopra က 7
ပယင်း Heard 6
Pixie Lotte 5
Deepika အမြဲလှပသောကြည့်ရှုသည်။ သူမ၏ပုံ, ကြီးထွားမှု, အပြုံး, သူ၏မျက်လုံးများ - ဘောလီးဝုဒ်နှင့်ဟောလိဝုဒ်အပေါငျးတို့သတော်ဝင်အလှအပကနေမတူညီတဲ့လုပ်သောထူးခြားတဲ့ features တွေ။
Lisa ကိုစုသိမ်း လီဇာ Soberano 2
ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်ဟောင်းကြယ်ပွင့် - လက်ျာ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ပထမဦးဆုံးနေရာ, "ဤလောက 2016 တစ်နှစ်အတွက်အလှဆုံးမိန်းကလေးများ" Selena Gomez။ Selena အလွန်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေမိန်းမငယ်သို့လှည့်။ ယခင်ကကသူမယခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလှအပနှင့်လိင်၏ပြီးပြည့်စုံအရောအနှောမွှေးများနှင့်အပြစ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Selena - ယုံကြည်မှုနှင့်သူမ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရာကသဘာဝညီညွတ်စည်းလုံးမှုသဘောကို၏ဂျ။
(စုစုပေါင်းအမြင်များ: အချိန် 8,657, တစ်နေ့လျှင်6လည်ပတ်မှု)
ဂျင်းဘောင်းဘီအနုပညာ acrylic အလှဆင်: အဝတ်လျှော် ... (6)
မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံက: အနှစ်ကုန်၏အဓိကခေတ်ရေစီးကြောင်း 2018 (6)
နွေရာသီသို့ရောက်လာသည် - ထိုဝှမ်းမှအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများ ... (5)
Polly တေလာဆွစ်ဖ်အားလုံး ပို. ပို. ဆင်တူ ... (4)